‘Nofy Tsy Mifanaraka: Politikan’ny Tanàna’: Manaitra Momba ireo Olana Sosialy Ao Nepal Ny Kanto · Global Voices teny Malagasy
"Nofy tsy mifanaraka", mankahatra ny fitantarana mahazatra momba an'i Nepal"
Voadika ny 10 Avrily 2019 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, 繁體中文, नेपाली, English
Iray tamin'ireo asa tao amin'ilay fampirantiana ‘Nofy tsy mifanaraka: ny politikan'ny tanàna': Sary an'ny mpanoratra. Fampiasaina nahazoana alalana.
ArTree Nepal, vondrona iray misy artista nepaley miisa enina , dia manao ho iraka tanterahana ny fanairana an'ireo vondrom-piarahamonina momba ireo olana sosialy no sady mandrisika ny hisian'ny fifanakalozankevitra mivaingana amin'ny alàlan'ny kanton'ny vanimpotoana ankehitriny ataon'izy ireo. Navoitran'ilay tarika ireo olana marimpototra, tahaka ny hoe fitokonana tsy hisakafo nataon'i Dr. Govinda mba hanavaozana ny sehatra ara-pahasalamana, ireo tanora ao Nepal mifindra-monina manao asa any ivelany, ny fanavakavahana mifototra amin'ny saranga sy ny foko ary ny fanondranana olona, ankoatra ireo maro hafa.
— 𑐁𑐣𑐣𑑂𑐡 𑐩𑐴𑐬𑑂𑐖𑐣 Ananda K. Maharjan(@aannda) July 23, 2016
Ny #fanoherana ara-javakanto matanjaka nataon'i Hitman Gurung sy Mekh Limbu mba hanohanana an'i Dr. KC niaraka tamin'ny Artree #IamwithDrKC #SaveDrKC pic.twitter.com/r9fvk8c7T9
Ny Martsa 2019 teo sy vao haingana tamin'ny Oktobra-Novambra 2018, narantin'izy ireo ny asany nomeny ny lohateny hoe “Nofy tsy mifanaraka: ny politikan'ny tanàna” nanasongadinana ny fomba nanilihan'ny tantaran'i Nepal ny tantaran'ireo vahoaka natao ankilabao, niangaran'ny vintana sy indizeny.
Nanoratra teo amin'ny Facebook ny vondrona hoe:
Nandritra ny an-jato taona maro, ny fitantaràna mahazatra an'i Nepal dia nanavaka an'ireo tantara sy ireo zavatra niainan'ireo vondrom-piarahamonina marobe natao ankilabao, niangaran'ny vintana ary indizeny. Na nisy aza ireo tranga naningantsingana tsindraindray nitakiana am-bava sy ireo fanoherana hisian'ny fisoloana tena mitovy ho an'ny karazana tsirairay, ara-kolontsaina, fiteny ary finoana, tsy mitsahatra ny manao tsindry hazolena amin'izy ireo ny Fanjakana.
Ny fampirantiana, “Nofy tsy mifanaraka: Politikan'ny Tanàna”, dia misarika ny saina ho amin'ireo an-tanan-tohatra ara-tsosialy fototr'olana sy ireo dindo iraisam-pirenena manjakazaka. Miaraka amina maso iray mangoraka, katsahany ny hanasongadinana ny fanararaotam-pahefana sy ny herisetra tohanan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanantitranterana ireo toe-javatra tena mifamattra amin'ny eo an-toerana. Amin'ny alalan'ny fampiasana fijery antropolojika (haiolombelona) sy fanadihadiana ny tontolo iainana ara-tsosialy sy ara-batana, katsahan'ilay fampirantina ny mba hampibaribary ireny lalàna tsy ara-drariny mifàka lalina ireny.
Ny fampirantina “Nofy tsy mifanaraka” – dia manao fanamby amin'ny fitantarana mahazatra momba an'i Nepal” sahala amin'izay ahafantarantsika azy, nampianarina antsika sy nasaina ninoantsika. Tena tsara ny mahita karazana lahateny mitsikera tahaka izany ary mizotra aminà fomba azo takarina! Resy lahatra fa raha oharina amin'ny teny, afaka manao asa tsara kokoa ny kanto! #ArtreeNepal pic.twitter.com/8AnxuFhMOk
— Sangita Thebe Limbu (@Sangita_Thebe)
Topazo maso ny asan'izy ireo:
‘Mahendra Mala’ an'i Subas Tamang. Sary an'ny mpanoratra. Fampiasaina nahazoana alalàna.
Ny asakanto ‘Mahendra Mala’ an'ny artista Subas Tamang, mitrandraka an'ireo toko amin'ilay boky nepaley mitovy anarana aminy izay nanasongadina finoana tokana, fiteny tokana ary kolontsaina tokana. Niangaliany fatratra teo amin'ireo solaitra nampiasaina ho tafo tany amin'ireo faritra ambanivohitra ireo toko tao anaty boky. Azo avadika ireo solaitra ary misy an'ireo toko avy amin'ny boky ny ilany raha ao ambadika kosa no misy ny anaran'ilay boky.
Niresaka tamin'ny Global Voices ilay artista, nanambara fa “indray andro any , hotsindrohan'ny Danphe iray (Lophophorus vorona mampiavaka ny firenena Nepaley), ireo voa nahahin'ny Lamas, vahoaka Tamang, teo amin'ny masoandro.” Tamin'ny fanazavana ny iray tamin'ireo tantara ao anatin'ny boky, nanampy izy hoe: “Roahan'ny Lama mankany avaratra ilay vorona. Amin'ny ririnina, midina ireo Lamas mba hamonjy ny Terai mafàna kokoa saingy ny Danphe, matahotra ny Lama, tsy sahy manatona ny Terai mihitsy, ilay lemaka ao atsimo. Diso ihany koa ireo vaovao omena ao anatin'ny boky. Raha toa ka vorona avy any Himalaya ny Danphe ary monina ao Himalaya, ireo Lamas kosa naseho ho toy ny manana toetra tsy valahara.
“Fahafatesan'ny Sivilizasiona” an'i Bikash Shrestha. Sary an'ny mpanoratra. Fampiasaina nahazoana alalàna
Tao anatin'ny ‘Fahafatesan'ny Sivilizasiona’, nanao sary sokitra ny Kianja Basantapur Durbar i Bikash Shrestha tamin”ny fampiasàna ireo poti-kazo ary notapahina tamin'ny bildozera ny sasany izay ahitàna ”ny dian'ireo kodiarana goavana.
Tao anatin'ny hoe ‘Ny Fomba nanadinoako ny Tenindreniko’, mampiseho ireo andiana boky voavakin'ny rainy i Mekh Limbu. ASongadin'ireo asany ny mikasika ny fomba izay nampiroboroboan'ny fandaharam-pianarana teny tokana monja, ny nepaley, nahatonga ny sasany hanadino ireo teny zanatany tany amin-dry zareo.
‘Masinya’ an'i Lavkant Chaudhary. Sary an'ny mpanoratra. Fampiasaina nahazoana alalàna
Miresaka ny olan'ny fanasokajiana ny asakanto ‘Masinya’ nataon'i Lavkant Chaudhary, asa izay namondronana ireo vahoaka Tharu ho toy ny Masinya Matwali (mpidoroka andevozin'ny toaka). Raha tarafina avy amin'ireo tavy tanimanga miisa 13 voasokitra, nanimba zavatra betsaka tao Terai ny famendrahana DDT tao sy ny firodorodon'ny olona avy any amin'ireo havoana nankao. Nambarany tamin'ny Global Voices fa “Tamin'ireo tavy 13 ireo, nosokiriko teo ambonin'ny telo ny tatitra fanadihadiana momba ny tranga tao Tikapur. Niharamboina tamin'ilay tranga ireo Tharus ary mbola tohizan'ny governemanta hatrany ny tsy famoahana ilay tatitra ho fanta-bahoaka.
Entin'i Hit Man Gurung, ao anatin'ilay asakantony “Impiry Aho no Tsy Maintsy Handoro Ay Ity” ireo sombina fanehoankevitra mikasika ireo hetsipanoherana isankarazany sy ireo revolisiona nanoherana ny mpitondra tao Nepal, nodorany izy ireny ary nalainy sary . Tamin'ny alàlan'ireo taratasy, mbola azo vakiana eny anatin'ireo gazety nodorana, fa tiany ny hampita izao hafatra izao: “raha mbola misy foana ny olana sy ny tsy fitoviana eny anaty fiarahamonina, mbola hisy foana ny kakay izay hivadika ho hetsipanoherana sy revolisiona”
Asehon'ny “Fanjahanana Ara-Kolontsaina”, kanto nataon'i Sheelasha Rajbhandari, ireo fitafy nentindrazana fitondran'ireo indizeny Tharus, Newars ary Gurungs, misy saritigetra kely arahana akanjo nalain-tàhaka avy amin'ireo anarana efa fantadaza erantany. Fanontaniana apetrak'ilay asakanto ny momba ny toetsain'ny tanora izay mahatsiaro ho ambaniana raha mitafy ireo fitafy nentindrazana nefa tsy manisy olana mitafy ireo fitafiana nalain-tàhaka taminà anarana efa fantadaza.
Mpikambana telo tamin'ilay vondrona, ireo asakanto an'i Mekh Limbu, Sheelasha Rajbhandari ary Hit Man Gurung no haranty ao amin'ny “Weltmuseum Wien” ao Vienne amin'ny 11 aprily hatramin'ny 6 novambra 2019.